ကြောင်နီ - ဝီကီပီးဒီးယား
တောကြောင်ငယ် တစ်မျိုးတမ်းပလိတ်:SHORTDESC:တောကြောင်ငယ် တစ်မျိုး
(အင်္ဂလိပ်: Bay cat)
ကြောင်နီ၏ သိပ္ပံအမည်မှာ ကာတိုပူးမား ဘာဒီယာ ဖြစ်သည်။ ကြောင်နီကို ဘော်နီယိုကြောင် ၊ ဘော်နီယိုကြောင်နီ ၊ ဘော်နီယိုကြောင်သလင်း စသဖြင့် အမျိုးမျိုးခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ဘော်နီယိုကျွန်းတွင်သာ တွေ့ရှိရသည့် ကြောင်ရိုင်းတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ (၂၀ဝ၇)ခုနှစ် စာရင်းများအရ အရွယ်ရောက်ပြီး ကြောင်နီကောင်ရေ ၂၅၀ဝ အောက်သာ ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ကြောင်နီများသည် ရှားပါးပြီး ကောင်ရေအလွန် နည်းပါးသည်။
ကြောင်နီများကို ဘော်နီယိုကျွန်းတွင်သာ တွေ့ရှိရသည်။ (၂၀ဝ၃)ခုနှစ်မှ (၂၀ဝ၅)ခုနှစ်အတွင်း ကြောင်နီ (၁၅)ကောင်ခန့်ကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ရာ ယင်းတို့အားလုံးမှာ ဆာဘား၊ ဆာရာဝပ်နှင့် ကာလီမင်တန်တို့မှ ဖြစ်သည်။ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံမှ မတွေ့ရပေ။
ညအချိန်တွင် သိုဝှက်စွာ ကျက်စားတတ်သည်။ (၂၀ဝ၃)ခုနှစ်မှ (၂၀ဝ၆)ခုနှစ်အတွင်း ကင်မရာထောင်ချောက်ဖြင့် စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ရာ ဓာတ်ပုံပေါင်း (၅၀၃၄)ပုံတွင် ကြောင်နီ၏ ဓာတ်ပုံမှာ တစ်ပုံသာ ပါဝင်လေသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ "Catopuma badia" (2016). IUCN Red List of Threatened Species 2016. IUCN.
↑ Hearn, A., Sanderson, J., Ross, J., Wilting, A., Sunarto, S. 2008. Catopuma badia. In: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2.
↑ Povey, K., Sunarto, H. J. G., Priatna, D., Ngoprasert, D., Reed, D., Wilting, A., Lynam, A., Haidai, I., Long, B., Johnson, A., Cheyne, S., Breitenmoser, C., Holzer, K., Byers, O. (eds.) CBSG. (2009) Clouded Leopard and Small Felid Conservation Summit Final Report. IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group: Apple Valley, MN.
↑ Mohd-Azlan, J., Sanderson, J. (2007). "Geographic distribution and conservation status of the bay cat Catopuma badia,aBornean endemic". Oryx 41 (3): 394–397. doi:10.1017/S0030605307000516.
↑ Meijaard, E. (1997). The bay cat in Borneo. Cat News 27: 21–23.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကြောင်နီ&oldid=710324" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။